Oge nke ụbọchị na Jenụwarị 19: akụkọ nke San Fabiano | Ahụrụ m Jizọs n'anya
Akụkọ banyere San Fabiano
Fabian bụ onye nkịtị nke Rome si otu ụbọchị si n'ugbo ya bịa obodo ka ndị ụkọchukwu na ndị mmadụ na-akwado ịhọpụta popu ọhụrụ. Eusebius, onye ọkọ akụkọ ihe mere eme na Churchka, kwuru na nduru fero fekwasị na isi Fabian. Ihe ịrịba ama a mere ka ndị ụkọchukwu na ndị nkịtị kwekọrịta, wee họrọ otu olu.
O duuru theka ruo afọ iri na anọ wee nwụọ n'ihi okwukwe ya n'oge mkpagbu nke Decius na 14 AD. Saint Cyprian degaara onye nọchiri ya na Fabian bụ "onye enweghị atụ" onye ebube ya na ọnwụ dabara na ịdị nsọ na ịdị ọcha nke ndụ ya.
Na catacombs nke San Callisto ị ka nwere ike ịhụ nkume kpuchie ili Fabiano, gbajiri iberibe anọ, na-ebu okwu Grik "Fabiano, bishọp, martyr". San Fabiano na San Sebastian na-eme oriri ya na Jenụwarị 20.
Anyị nwere ike iji obi ike na-aga n'ọdịnihu ma nabata mgbanwe ahụ uto chọrọ naanị ma ọ bụrụ na anyị nwere mgbọrọgwụ siri ike n'oge gara aga, na ọdịnala dị ndụ. Piecesfọdụ okwute dị na Rome na-echetara anyị na anyị bụ ndị na-ebu ihe karịrị narị afọ iri abụọ nke ọdịnala dị ndụ nke okwukwe na obi ike na ibi ndụ nke Kraịst ma gosi ya ụwa. Anyị nwere ụmụnne nwoke na ụmụnne nwanyị ndị "buru ụzọ gosi anyị ihe ịrịba ama nke okwukwe", dịka ekpere Eucharistic nke mbụ kwuru, iji mee ka ụzọ dị ọkụ.